သတင်း - အာလူးစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရိတ်သိမ်းသူများ အသုံးပြုသည့် စိုက်ပျိုးမြေအခြေအနေ
အာလူးစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရိတ်သိမ်းသူများ အသုံးပြုသည့် စိုက်ပျိုးမြေအခြေအနေ
အာလူးရိတ်စက်အလုပ်ထိရောက်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်ပြီး အာလူးရိတ်သိမ်းမှု အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။အခြားစက်ပစ္စည်းများကဲ့သို့ပင်၊ ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏အသုံးပြုမှုနယ်နိမိတ်အခြေအနေများနှင့် အကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေများရှိပြီး အာလူးရိတ်သိမ်းစက်များသည် ချွင်းချက်မရှိပါ။အာလူးရိတ်စက်စျေးနှုန်းစျေးသက်သက်သာသာနဲ့ အရည်အသွေးမမီပါဘူး။အာလူးရိတ်စက်များ ဝယ်ယူခြင်း။စျေးကွက်မှာလည်း မညီညာဘူး။အာလူးစက်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့် စက်ပစ္စည်းများ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီမှ တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသော ထုတ်ကုန်လက္ခဏာများနှင့်အညီ သုံးစွဲသူအများစု၏ ရည်ညွှန်းချက်ဖြစ်သည်။
အာလူးစိုက်ဧရိယာများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် တောင်ကုန်း၊ မြင့်သော၊ အေးပြီး အေးသောနေရာများဖြစ်ပြီး အများစုမှာ ခြောက်သွေ့သောမြေများဖြစ်သည်။လယ်ယာလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ကုန်းစောင်း၏ အလျားလိုက် ဦးတည်ရာအတိုင်း လုပ်ဆောင်ကြပြီး လုပ်ငန်း၏ အရည်အသွေးကို သေချာစေရန် အတတ်နိုင်ဆုံး ကုန်းစောင်း၏ လွှမ်းမိုးမှုကို ရှောင်ရှားကြသည်။အာလူးရိတ်သိမ်းယူနစ်သည် ယေဘူယျအားဖြင့် 8° ပတ်လည် လျှောစောက်ခင်းများတွင် အလုပ်လုပ်သောအခါ ဘေးကင်းသော gradient တန်ဖိုးတစ်ခုရှိသည်။ဤတန်ဖိုးထက် ကြီးပါက၊ အာလူးရိတ်သိမ်းယူနစ်၏ ဆွဲငင်အားဗဟိုသည် ဘေးတိုက်ပြောင်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ရိတ်သိမ်းမှုအရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေပြီး ယူနစ်ကို အလွယ်တကူ လိပ်သွားစေသည်။
စက်မှုလယ်ယာအာလူးရိတ်သိမ်းခြင်းအတွက် မြေကွက်များသည် စက်မှုလယ်ယာအာလူးရိတ်သိမ်းခြင်း၏ အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အခြေခံအခြေအနေဖြစ်သည့် မြေသားအနေအထားနှင့် တွင်းပေါက်များရှိနေသင့်သည်။မြေတွင်းရှိ တွင်းများသည် အာလူးရိတ်သိမ်းသူအား မတည်ငြိမ်သော အနက်တွင် တူးစေသည်။မြေတွင်းအပေါက်များနှင့် ကြုံတွေ့ရသောအခါ တူးဖော်မှုအတိမ်အနက် တိုးလာကာ ထွန်စက်ဝန်များ တိုးလာကာ အာလူးမြေကို ခွဲထုတ်ရာတွင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိသည့်အပြင် အာလူးရိတ်သိမ်းသည့် ယူနစ်သည် ထိုင်ထထွန်စက် ဖြစ်တတ်ပါသည်။မြေကြီးလာသောအခါ တူးဖော်မှုအတိမ်အနက် လျော့နည်းလာကာ အာလူးကွဲထွက်နှုန်း တိုးလာကာ အာလူးအသားတင် အထွက်နှုန်းလည်း လျော့နည်းလာသည်။
စက်မှုလယ်ယာ အာလူးရိတ်သိမ်းခြင်း၏ ဝိသေသလက္ခဏာများမှာ အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး ထိရောက်မှုမြင့်မားသည်။အာလူးရိတ်သိမ်းသူသည် စက်မှုလယ်ယာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို တိုးမြင့်ရန် အထောက်အကူမပြုသည့် လယ်မြေအနည်းငယ်တွင် ရိတ်သိမ်းသည်။
စက်မှုလယ်ယာဖြင့် အာလူးရိတ်သိမ်းခြင်းအတွက် ပထမဦးစွာ အာလူးစိုက်ကွက်များကြားတွင် အာလူးရိတ်သိမ်းယူနစ်၏ ချောမွေ့စွာလည်ပတ်မှုကို သေချာစေရန် လိုအပ်ပါသည်။ထို့ကြောင့် အာလူးရိတ်သိမ်းချိန်အတွင်း လယ်ကွင်းလမ်းကို ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထိန်းသိမ်းထားရန် လိုအပ်ပြီး လယ်ကွင်းပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အာလူးရိတ်သိမ်းယူနစ်၏ ဘေးကင်းမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသေချာစေရန်အတွက် အချိန်တိုင်း ချောမွေ့သောအခြေအနေတွင် ထားရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
5. နက်နဲသော ထွန်ယက်ခြင်း။
အာလူးကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် မြေသြဇာကောင်းသော၊ ချောင်ပြီး နက်ရှိုင်းသော မြေဆီလွှာတွင် ရေနှင့် ဓာတ်မြေသြဇာ ထိန်းထားနိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိများ လိုအပ်ပြီး ၎င်းသည် ဥများချဲ့ထွင်ရန်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။၎င်းသည် တူးဖော်မှုအတိမ်အနက်ကို တတ်နိုင်သမျှ ထိန်းချုပ်ရန် အကျိုးရှိသော အာလူးများကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရိတ်သိမ်းခြင်း၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပြီး ထယ်၏အောက်ခြေအလွှာကို မကွဲစေရန် အာလူးဥ၏ ကြီးထွားမှုအတိမ်အနက်အတွင်း ထိန်းသိမ်းထားရန်၊ ဝန်ကိုတိုးလာစေပြီး အာလူးမြေ၏ခွဲထွက်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။
အာလူးရိတ်သိမ်းရာတွင် စက်မှုလယ်ယာစနစ်ဖြင့် ရိတ်သိမ်းခြင်းသည် အာလူးရိတ်သိမ်းသည့်မြေ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည့် အာလူးဥများကို တူးဖော်ပြီး ခွဲထုတ်ရန် လိုအပ်သည်။တူညီသော မြေဆီလွှာတွင် မတူညီသော အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုကြောင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ ကွဲပြားသည်။ရေပါဝင်မှုနည်းသောအခါ မြေဆီလွှာမာကျောပြီး အာလူးရိတ်သိမ်းမှု ခံနိုင်ရည် ကြီးမားသည်။ရေပါဝင်မှုနည်းပါးသော ပလပ်စတစ်ကန့်သတ်ချက်သို့ ရောက်ရှိသောအခါ မြေဆီလွှာသည် ပျော့ပျောင်းပြီး ရိတ်သိမ်းမှု ခံနိုင်ရည် နည်းပါးသောကြောင့် မြေဆီလွှာ၏ သင့်လျော်သော ရိတ်သိမ်းမှုအခြေအနေဖြစ်သည်။ရေတိုးလာပြီး ကပ်တွယ်မှု ကန့်သတ်ချက်သို့ ရောက်သောအခါ၊ ကပ်တွယ်မှု အားကောင်းလာကာ မြေဆီလွှာသည် အာလူးရိတ်သိမ်းစက်၏ လုပ်ငန်းခွင် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် လမ်းလျှောက်ကိရိယာများကို တွယ်ကပ်ကာ ရိတ်သိမ်းခြင်းကို ခံနိုင်ရည် တိုးလာကာ အာလူးမြေကို သန့်ရှင်းစွာ မခွဲထားနိုင်သလိုပင် ရိတ်သိမ်း၍မရပါ။ .
မြေဆီလွှာသည် ၎င်း၏ရေပါဝင်မှုအပေါ် မူတည်၍ အစိုင်အခဲ၊ ပလပ်စတစ်နှင့် စီးဆင်းမှု ကွဲပြားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေသုံးမျိုးရှိသည်။အစိုင်အခဲအခြေအနေတွင်၊ မြေဆီလွှာသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ကပ်မသွားဘဲ အာလူးရိတ်သိမ်းစက်၏ အလုပ်လုပ်သော အစိတ်အပိုင်းများကို လိုက်နာခြင်းမရှိပါ။သို့ရာတွင် အစိုဓာတ် 10% အောက်ရှိသော ရွှံ့စေးလေးလံသော မြေများသည် အလွန် ပေါင်းစည်းပြီး မာကျောသော မြေစိုင်များ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ပလတ်စတစ်အခြေအနေတွင်၊ ၎င်း၏အလေးချိန်ကြောင့် မြေဆီလွှာသည် ပုံပျက်သွားနိုင်ပြီး မြေဆီလွှာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်လာသော်လည်း ယခုအချိန်တွင် အာလူးရိတ်သိမ်းသည့်ဌာနသည် လယ်ကွင်းအတွင်း ပုံမှန်မရိတ်သိမ်းနိုင်ပါ။ထို့ကြောင့် အာလူးရိတ်သိမ်းသူသည် စိုထိုင်းဆနည်းပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော စီမံခန့်ခွဲမှုရှိသော အာလူးလယ်များတွင် ရိတ်သိမ်းရကာ မြေဆီလွှာ ပျော့ပြောင်းကာ တူးဖော်မှု ခံနိုင်ရည်နည်းပါးကာ မြေဆီလွှာကို အလွယ်တကူ သန့်စင်ပေးနိုင်သည်။
အာလူးကို စက်မှုလယ်ယာစနစ်ဖြင့် ရိတ်သိမ်းခြင်း၏ အနှစ်သာရမှာ အာလူးကြီးထွားသည့် လယ်ထွန်အလွှာကို စစ်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင်၊ တူးဖော်ခြင်းဂေါ်ပြားသည် နက်ရှိုင်းသောဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် မြေဆီလွှာကို ရွေ့လျားခြင်းအခြေအနေတွင် ရှိနေသည်။rotary screen နှင့် swing screen ကဲ့သို့သော ခြားနားသည့် ယန္တရားများသည် အာလူးဥများ တင်ခြင်းနှင့် စုဆောင်းခြင်းကို အောင်မြင်စေရန်အတွက် အချို့သော အမြန်နှုန်းနှင့် လွှဲခွင်တွင် စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် သယ်ဆောင်ခြင်း အခြေအနေတွင် ရှိနေပါသည်။ထို့ကြောင့် ကျောက်တူးခြင်း၊ သံဝါယာကြိုးများ၊ သံလက်သည်းများ၊ မြက်များ၊ ကျစ်ဆံမြီးများနှင့် အခြား မာကျောသော သို့မဟုတ် ပျော့ပျောင်းသော အမျှင်များကို မြေဆီလွှာတွင် မကပ်စေဘဲ တူးထားသော ဂေါ်ပြားကို မပျက်စီးစေရန်၊ စက်မှုလယ်ယာမှ အာလူးရိတ်သိမ်းမှု အရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေပါသည်။